फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक योहान बिहीबार नेपाल आउने
Thu, Jul 9, 2020 at 6:39am
विश्वमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै थपिए दुई लाख भन्दा बढी काेराेना संक्रमित #आहा खबर# कम्बोडियाले लगायाे कुकुरको मासुको व्यापारमा प्रतिबन्ध #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री हुने भए चुनाव कुर्नुस्’ #आहा खबर# आजदेखि चार दिन यस वर्षकै ठूलाे पानी पर्ने, पूर्वतयारी अपनाउन आग्रह #आहा खबर# सीके राउतका दुई दर्जन बढी कार्यकर्ताले गरे पार्टी परित्यागको घोषणा #आहा खबर# महिनावारी ढिलाई हुनुका यस्ता छन् चार कारण #आहा खबर# डब्लुएचओबाट औपचारिक रुपमा बाहिरियो अमेरिका #आहा खबर# संकटको घडीमा मानवताको परीक्षण हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# अबको चार दिन यो वर्षकै बढी वर्षा, यी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह #आहा खबर# ओली-प्रचण्डबीच झण्डै २ घण्टा छलफल, आज के भयो ? #आहा खबर# लकडाउनमै छापियो साढे तीन लाख लाइसेन्स #आहा खबर# उपत्यकामा २३ सहित थप २५५ जनामा कोरोना पुष्टि #आहा खबर# काँग्रेस महासमिति सदस्य महेन्द्र मल्ललाई पार्टीले गर्‍याे ५ वर्षे कारवाही #आहा खबर# बुधबार पनि बढ्याे सुनको मूल्य, कति छ आजकाे बजार भाउ ? #आहा खबर# कैदीलाई पनि बिहे र प्रजनन अधिकार दिन माग #आहा खबर#
बुधबार, ८ फागुन २०७५,	आहाखबर
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन बिहीबार नेपाल आउने भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले गत माघ ३ गते राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेपछि कालिन राष्ट्रिय टोली सम्हाल्न नेपाल आउन लागेका हुन् ।
एन्फाका अनुसार योहान बिहीबार दिउँसो नेपाल आइपुग्नेछन् । उनलाई दुई वर्षका लागि एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी अघिल्लो महीना दिएको थियो । सम्झौताअनुसार उनले २०१९ मार्च १ बाट २०२१ फेब्रुअरी २८ सम्म नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् ।
यस अघिका जापानी प्रशिक्षक ग्यातुको कोजी प्रवेशाज्ञाका कारण नेपाल आउन नपाउने भएपछि एन्फाले नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पर्यटकीय भिसामा नेपालमा काम गरेका कोजीको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया एन्फाले अघि नबढाउँदा उनले पर्यटकीय प्रवेशाज्ञामा नेपालमा काम गर्दै आएका थिए । गत भदौदेखि उनी नेपाल आउन पाएका थिएनन् । उनको सम्झौता भने गएको डिसेम्बरसम्मका लागि थियो ।
योहानले २०७० सालमा ‘ए’ डिभिजन क्लब मछिन्द्रको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेका थिए । योहानको नेतृत्वमा मछिन्द्रले उक्त वर्षको ‘ए’ डिभिजन लिग दोस्रो स्थानमा रहेर समाप्त गरेको थियो । योहानले स्विडेनको तेस्रो डिभिजन क्लबबाट व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरु गरेका थिए ।